နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Nobita Fly On Sky
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Nobita Fly On Sky
ဖေါ်ပြချက်: Nobita မိုဃ်းတိမ်ပေါ်ခုန်နှင့်တတ်နိုင်သမျှမြင့်မားရကိုကူညီပါ။ သင်ပျောက်ကွယ်သွားပါစေအသီးအသီးသောမိုဃ်းတိမ်နှုန်းမှတ်ရလိမ့်မယ်။ လေထုထဲတွင်နေထိုင်ရန် mouse ကိုခုန်များနှင့်ပြောင်းရွေ့ဖို့ကိုနှိပ်ပါ။
ကစား: 32,423 tag ကို: doraemon ဂိမ်း, Doraemon, nobita, nobita ဂိမ်း, Suneo, Takeshi, Shizuka, Shizuka ဂိမ်း, sky
Nobita Shizuka ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်သူတို့ကိုအနီးနောက်ယောင်ခံ Suneo နှင့် Takeshi နမ်းချင်တယ်။ Nobita ဖမ်းမိခံရမပါဘဲ Shizuka နမ်းကိုကူညီပါ။
Doraemon လမ်း Race: Doraemon လမ်း Race: Doraemon သူ၏အဆွေခင်ပွန်းသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုရှေးခယျြနှငျ့သငျအစာရှောင်ခြင်းအရှိန်မြှင့်နှင့်အသစ်အဆင့်ဆင့်ပျော်စရာရှိသည်သော့ဖွင့်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်အာနိသင်တိုးမြှင့်ကိုသုံးကျော်မဆိုပြိုင်ဘက်ယူမီကအဖြစ်အစာရှောင်သင်တတ်နိုင်သလောက်မောင်းပြိုင်ကားဖြစ်ပါတယ်!
Nobita အလမ်းအတွက်စုပေါင်းအားလုံး humburger အားဖြင့် Doraemon တွေ့ဆုံရန်ကိုကူညီပါ။
စီအဆင့်အတန်းများအတွက်လိုအပ်သောပူဖောင်းများဖမ်းငှက်များနှင့်အတူသတိထားဖြစ်နှင့်လိုအပ်သောကာလ၌မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ရန် Doraemon ကိုကူညီပါ
သငျသညျ Flappy Bird ကိုဂိမ်းကိုချစ်သလား? ဒီဂိမ်း flaapy ငှက်အကြောင်းစီးရီးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ရဲ့အားလုံးကိတ်မုန့်စုဆောင်း Doraemon စွန့်စားမှုပိုက်ကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီကွပါစို့။
tokyo ပြိုင်ကား doraemon
သငျသညျ Doraemon ကိုချစ်သလား? ဒီ Doraemon စီးရီး၏ရယ်စရာဂိမ်းရဲ့, သင်ကားပြိုင်ကားအားဖြင့်တိုကျိုမြို့ရှိ Doraemon အတူ aventure join, Doraemon မြို့အလမ်းအတွက်အတားအဆီးကိုရှောင်ရှားကိုကူညီပေးပါတယ်။
စာနယ်ဇင်း Nobita ခုန်အောင်ပြသနှင့်ထိ space bar ကိုအဖြစ်မြှား keys ကို။ ပိုပြီးမှတ်ရရအောင်မြင်စွာအခက်အခဲများကိုရှင်းလင်းနှင့်အချိန်တိုးမြှင့်
Doraemon ပြင်သစ်နိုင်ငံ Fashion Week သို့တက်ရောက်ရန်။ Doraemon သင်တန်းသားများကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်လျော်သောအဝတ်ကိုပါတီကိုကူညီရှာဖွေပေးပါ။ သငျသညျ Doraemon များအတွက်ဝတ်စုံမထိုက်မတန်ရှေးခယျြနိုငျ
ပိုးစုန်းကြူးဖမ်းရန်သစ်တောသို့ Doraemon ။ သငျသညျသူတို့ကိုမထိလျှင်ရေလွှမ်းမိုးပိုးစုန်းကြူးပျံသွားနိုင်သည်, ဖားရှာတ, တော၌ Doraemon ဖမ်းပိုးစုန်းကြူးကိုကူညီပေးပါ။
Doraemon နှင့် Nobita, တောတွင်းအတွက် platypus ပြေးတစ်ဦးစာရေး platypus လိုက်ရှာ, တိရစ္ဆာန်ပြောက်ကျားရှိပါတယ်ဖြစ်သောကြောင့်သတိပြုရကြမည်, Doraemon သူတို့ကိုဖမ်းကူညီဖို့ပါ။